HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IMM, Sirkeci နှင့်Haydarpaşaရထားဘူတာအဆိုပါတင်ဒါအဖြစ်သူတို့ကိုအားပေးပြီးမှတောင်း
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
IMM sirkeci နှင့် haydarpasa ဘူတာရုံများအတွက်တင်ဒါအဖြစ်သူတို့ကိုပေးချင်ခဲ့တယ်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ကသမ္မတİmamoğlu, တူရကီသမ္မတနိုင်ငံDemiryolları'n (TCDD) နေ့စွဲ Sirkeci နှင့်Haydarpaşaဘူတာ၏နူးညံ့သောထုတ်ပေး, လေလံမပါဘဲသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းချင်တယ်။
ဆူး'' သတင်းအဆိုအရ; "တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22, TCDD ဘူတာရုံပေါ်တွင်တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေကြေညာချက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုရမည့်ချေးငွေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ IBB ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluလည်းသူကတင်ဒါဝင်လိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအဆိုပါ IMM ဘူတာရုံလေလံပွဲခိုင်ခိုင်လုံလုံဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်ဝင် '' ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးအဟန့်ပါလိမ့်မယ် '' ။
'' အများပြည်သူဖို့ IMM လွှဲပြောင်း၏အမာခံ, ဥပမာရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ''
သူသည်ဘူတာရုံကိုလိုက်နာမယ်လို့ဟူမူကား, နီးကပ်စွာ, ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါတဲ့ဘာသာရပ် IMM Haydarpaşaနှင့် Sirkeci မှာ Florya အစည်းအဝေးအတွင်းသမ္မတနေထိုင်ရာမှာကျင်းပ '' အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးနှစ်ခု icon များအကြောင်း, နှင့်တူရကီရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါငျးတို့သခေါ်ဆောင်သွား 'İmamoğluညွှန်ပြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနုကိစ္စကိုမီးမောင်းထိုးပြ: " ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂိုဒေါင်၏မြေဧရိယာနှင့်အတူ icon နှစ်ခုတင်ဒါမှတတ်၏။ ကျွန်တော်တို့ဟာနူးညံ့မှထွက်ပေးနေရာများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း အဘယ်သူမျှမစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုရှိပါသည်။ Buralar ပြီးသားဧရိယာ protected, သင်လက်ရှိထိပ်တန်းထဲကတစ်ခုခုလုပ်မပေးနိုင်ပါ။ အလွန်ကောင်းတဲ့။ သင်တို့သည်လည်းငွေရှာ။ ဒါဟာအစအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေသင်တို့အဘို့အခွင့်အလမ်းရရှိ။ သူက '' သင်ကသင့်လျော်သောအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများစကားပြောဤအရပ်တို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ 'ဟုပြောထားသည် ဒါကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် ibb စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်၌ဤဥပမာရာပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနကိုပြု၏, သူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလုပ်ခဲ့တယ် ... သည်သူ၏များစွာသောလူထုအဖွဲ့အစည်းများဥပမာရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ "
'' သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန် IMM ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကဘာလဲ? ''
'' ဘယ်လိုတင်ဒါ '' သင်အများပြည်သူနှင့်အတူမျှဝေဖို့လိုကြောင်းİmamoğluအောက်ပါအတိုင်းစကားများဆက်လက်ဖြစ်ပါသည်: '' ။ 20 သန်းပေါင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်လိမ့်မည် '' "သင်ဒါလိုက်နာတည်နေရာကိုနူးညံ့ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်၏သတ်မှတ်ချက်များအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ 20 သန်းပေါင်, ဒါမှမဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုသညျကား, တူရကီတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများအတွက်ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဤကြေညာချက်မချခင်သင်ကဘယ်လိုတင်ဒါပြောပြရန်လာကြလိမ့်မည်တစ်ကြိမ်။ "
"? သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်စေဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆျောမှုရှိပါတယ်": စသည်တို့ကို "ပြိုင်ပွဲ blocker ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနခိုင်ခိုင်လုံလုံ IMM ဘူတာရုံကိုလည်းİmamoğluနုရိုက်ထည့်ရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ '' ကြောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ပေးသည် '' သူကမေးနှင့်အကဆက်ပြောသည် ထိုသို့ပြုမှတရားရုံးတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းညွှန်ကြားရေးမှူးယေဘုယျဖော်ပြချက်များလေလံဆွဲလုပ်နေကြောင်းတရားရုံးများ၏ဖော်ပြချက်ရဲ့အဆုံးမှာကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ "
'' ဥပဒေခွင့်ပြုလျက်, ငါတို့သည်လည်း '' သူ့ကိုနူးညံ့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်
İmamoğluနှစ်ခုအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ ibb'yl ဘူတာရုံတင်ဒါများအကြားသဘောတူညီချက်အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် protected ဧရိယာİmamoğluညွှန်း, 'ကစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအစေခံမယ်လို့' 'သူကအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုအသုံးပြု: "Burr ရဲ့ IMM နီးစပ်သူလမ်းနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများအကြားစာချုပ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံလွှဲပြောင်းရန်အကြှနျုပျ၏အကြံပြုချက်။ ငါတို့သည်လည်းကကာကွယ်ထားဧရိယာ၏အနုပညာဖို့လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအရည်အချင်းပြည့်မီအလုပ်ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်မြို့ထဲသို့လက်ဆောင်တစ်ခုမရှိဘဲကုန်သွယ်ရေးကြကုန်အံ့။ ကျနော်တို့ကဒီတင်ဒါများနှင့်အနုပညာ, ယဉ်ကျေးမှု IMM အခန်းကဏ္ဍမှဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ဦးအာကာသသို့လှည့်ရန်လမ်းပေးလိမ့်မည်ဟုအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်၏လူများကိုခံထိုက်သောဤအရပျသားမြားသို့သွားပါတယ်။ ငါသည်ဤအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာဆန္ဒရှိ, ငါလူတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်ချင်ပါတယ်။ "
İmamoğluကိုလည်းကိုလည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုသတိပြုအဖြစ်-လေလံဧရိယာ '' ဟုပြောသည် "သူ့ကိုအတွက်ခွင့်ပြုပါ, ကျနော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသူတို့ ediyor- ဒေတာယောက္ခမနူးညံ့သော," ဟု၎င်းကပြောသည်။
Kiran အားဖြင့် Sirkeci နှင့်Haydarpaşaမီးရထားဘူတာ Give မှ TCDD 25 / 09 / 2019 အဆိုပါတူရကီသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ Sirkeci Haydarpasa ဘူတာရုံ၏ဝေမျှ၏Demiryolları'n, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ငှားရမ်းခံရလိမ့်မယ်။ IMM İmamoğluသမ္မတ, TCDD Sirkeci နှင့်Haydarpaşaဘူတာ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာမြှို့နယ်အချို့အစိတ်အပိုင်းများထဲမှာရှိသကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်ပုံစံမျိုးရယူလေလံငှားရမ်းပါလိမ့်မယ်သူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါတူရကီသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ Sirkeci Haydarpasa ဘူတာရုံ၏ဝေမျှ၏Demiryolları'n, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဖြစ်ရပ်များအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ငှားရမ်းခံရလိမ့်မယ်။ ကအောက်တိုဘာလ 224တထောင်ပေါင်လစဉ်ငှားရမ်းခအခကြေးငွေအတွက်တင်ဒါတွင်ပါဝင်ဖော်ပြထားသည်တနင်္ဂနွေရက်တွင်တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေအဆိုပါကြေညာချက်စက်တင်ဘာလ 30, နူးညံ့, 90 တထောင်ပေါင်ပေါ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် ...
BURULAŞ circuit ကိုကားဝယ်ယူ (ဗီဒီယိုအထူးသတင်း) များအတွက်တင်ဒါအတွက်ထားခဲ့ပါတယ် 18 / 01 / 2013 တစ်ဦးကတင်ဒါလှည်းဝယ်ယူရေး "အမှတ်တံဆိပ်မွို့" Bursa ၏BURULAŞ circuit ကို AKP မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ကိုသူတို့ပွုပါမညျဆိုသညျကား, ဒါပေမယ့်ဒေသခံတွေလမ်းရထားထုတ်လုပ်မှုဝါကြွားပေမယ့် TMMOB related အစီရင်ခံစာများမြို့တော်စည်ပင်ကငြင်းပယ် Bursaray မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းကပါစေ။ အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ Bursaray ဥရောပကနေမှာ "junk ကားများ" ယူရိုသန်း6မှသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ တောင်းဆိုမှုများအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေပြဿနာများမြို့တော်အသစ်ပြဿနာများတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်း Bursa အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်မတ်လတွင်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ Bursa ဘဏ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း (MMO) ကသမ္မတအာဗြဟံ, Bursa ၏အနာဂတ်မှားယွင်းတဲ့နှင့်အတူမှားပေါ်လုပ်နေတာဟာစည်ပင်သာယာရေတိုရေရှည်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဖြေရှင်းနိုင်။ အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူမတ်လ MMO Bursa ဌာနခွဲကသမ္မတအာဗြဟံသည် '' သူတို့က AL အပိုင်းအစ '' ...
အဆိုပါမိန်းမဆောင်ခြင်းနှင့် Sirkeci ဘူတာ၏ .. 28 / 11 / 2012 နှလုံး Mustafa, ဘယ်နေရာမှာသူတို့ဘော်လကန် Sirkeci အတွက် Sultan Abdul Hamid နှင့်မိန်းမဆောင်ဘူတာရုံသည်ကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားများ၏မျှော်လင့်ချက်များပြောပြသည်။ ငါသူတို့ကဆြုံးရောက်ရှိမည်အခိုက် .. ထိုမြော်လင့်ခြင်းသည်မှာနားလည်! သွားပြီအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အဓိကမီးရထားဘူတာရုံငါဆိုးဆိုးရွားရွားလှုပ်တာပါ။ Sultan Abdul Hamid လည်း Sirkeci အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သောဘူတာရုံမှသွားပြီ, download, ငါသည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့၏တစ်ဝက်၏နေအိမ်သို့ သွား. ထိုမိန်းမဆောင်ဘူတာရုံ၏နာကျင်မှုငါ့နှလုံး၏နက်နဲသောပင်လယ်အတွက်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းများပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်ခံစားရသည်။ Sultan Abdul Hamid tamamlans ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားကြီး Sirkeci မီးရထားမှကြှနျုပျတို့၏အကွယ်အကာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်လကန်မြို့များကျွန်တော်တို့ကိုယူမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးရထားဘော်လကန်, မက်ဆီဒိုးနီးယား, ကိုဆိုဗို, ဘူလ်ဂေးရီးယား, Thessaloniki (ဂရိ), ရိုမေးနီးယား, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား, ဆားဘီးယားနှင့်အယ်လ်ဘေးနီးယားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားတအနာဂတျမှာတဦးတည်း .. Sirkeci ဘူတာ, ဗီယင်နာကိုသွားပါလိမ့်မယ် ...
အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်သမိုင်း၏ 200 နှစ်များတွင် pianist Tuluyhan Ugurlu Sirkeci ရထားဘူတာဘူတာ 11 / 12 / 2012 pianist Tuluyhan Ugurlu Sirkeci ယင်းဘူတာမှာရှိတဲ့သမိုင်းဘူတာရုံ၏ 200 တစ်နှစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်ဖျော်ဖြေပွဲ pianist Tuluyhan Ugurlu Sirkeci တူရကီဖျော်ဖြေပွဲအတွက်သမိုင်းဝင်ဘူတာရုံတွေ့ဆုံရန်ဖို့အစာရှောင်ရထားနှစ်ပတ်လည်ပုံပြင်ကိုပြောပြလိမ့်မယ် 200 ၏ဘူတာ-Uğurlမှာဖျော်ဖြေပွဲကိုငါပေးမည်။ ဒီဇင်ဘာလ၌စန္ဒယား virtuoso Tuluyhan Lucky, 'လှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်, 15-16 က' လျင်မြန်စွာနေ့စွဲများတွင်အနက်ရောင်ရထားသမိုင်းဝင်မီးရထားဘူတာရုံက 'Sirkeci ရထားဘူတာမှာဖျော်ဖြေပွဲကိုငါပေးမည်။ pianist Ugurlu ဒီဇင်ဘာ 15-16, 19 အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ခန်းမစောင့်ဆိုင်းနေသည့် Sirkeci မီးရထားဘူတာရုံ။ အဆိုပါရထားလမ်းစွန့်စားမှုကနေစတင်ပြီးခဲ့သည့်ရာစု၏ဇာတ်လမ်းပေါ်တွင်လူ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ကဗြာဆနျခကျြမြားဖွငျ့ဖျောပွထားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကမိုင်း, မှရေနွေးငွေ့ရထားအတွင်းပထမဆုံးသံလမ်းကို တင်. , သမိုင်းဝင်ဘူတာရုံတစ်ဝိုက်တွင်တူရကီ၌ပေးသောပါလိမ့်မည် ...
KOS, မြောက်သစ်တောပေါ်တွင်ကျဉ်းမြောင်း gauge ရထားလမ်းနှင့်အဆောက်အဦဖိအားအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ Eyup မြူနီစီပယ်အဆုံးသတ်ချင်ခဲ့တယ် 20 / 02 / 2017 KOS, ကျဉ်း gauge ရထားလမ်းအပေါ်မြောက်ပိုင်းသစ်တောများတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ Eyup မြူနီစီပယ်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအဆုံးသတ်ချင်ခဲ့တယ်: မြောက်အမေရိကသစ်တော၏ Eyup မြူနီစီပယ်ကာကွယ်ရေး၏ဖိတ်ကြားချက်အရမှာကျဉ်းမြောင်းတဲ့ gauge လိုင်းစီမံကိန်းကိုအစည်းအဝေးတစ်ခု, ကျင်းပခဲ့ဘဲဂရိတ်အတွက်အကဲဖြတ်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအရပျကိုလုယူသကဲ့သို့, Eyup မြို့တော်ဝန်အဆင့်ဓား, ဒုတိယမြို့တော်ဝန်လေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပတ်သက်. အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းမှာတိုက်ခန်းမန်နေဂျာနှင့် KOS အကြံပေးအဖွဲ့လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဘဲဂရိတ်သစ်တောနံရိုးမက်ဆေ့ခ်ျ၏သမာဓိရှိနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်သစ်တစ်ခုဇုန်ဒေသဖွင့်လှစ်ရန်စီမံကိန်းဆန့်ကျင်သူတို့၏ကန့်ကွက်တွေ့ဆုံနှစျနာရီခနျ့ကြာခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးများတွင်မြောက်ပိုင်းသစ်တောများ, နောက်ဆုံးကတော့ဘဲဂရိတ်သစ်တော၏သဘာဝသမာဓိရှိကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ...
BURULAŞ circuit ကိုကားဝယ်ယူ (ဗီဒီယိုအထူးသတင်း) များအတွက်တင်ဒါအတွက်ထားခဲ့ပါတယ်
အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်သမိုင်း၏ 200 နှစ်များတွင် pianist Tuluyhan Ugurlu Sirkeci ရထားဘူတာဘူတာ
KOS, မြောက်သစ်တောပေါ်တွင်ကျဉ်းမြောင်း gauge ရထားလမ်းနှင့်အဆောက်အဦဖိအားအပေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ Eyup မြူနီစီပယ်အဆုံးသတ်ချင်ခဲ့တယ်
Haydarpasa နှင့် Sirkeci Gebze Halkalı အကြားခရီးသည်ရထားကိုဖယ်ရှားခြင်း
CR3 သဘောတူညီချက် (Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı ) ခရီးသွားလက်မှတ်ရထား, မြို့ပြ, လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစနစ်များတိုးတက်စေူခင်း
Sirkeci-Halkalı လုပ်ခအတွက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနှင့် Haydarpasa-Pendik ခရီးသည် 50
Greve မျက်စိအလင်းယိုင်ခြင်းအတွက် Haydarpasa နှင့် Sirkeci ရထားဘူတာ
Sarigul: Haydarpasa နှင့် Sirkeci ဘူတာပြတိုက်ဖွစျလိမျ့မညျ